नवीनतम उपकरणसहित ‘पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल’ सञ्चालनमा - Jhilko
–विष्णु नेपाल/सुरेन्द्र भण्डारी
“कुनै अप्ठ्यारो महशुस भएमा विस्तारै हात उठाउनुहोला । हामी बाहिर हुन्छौँ । केही हुँदैन । न आत्तिनु ।” डा वीरेन्द्र यादवले स्वचालित स्टेचरमाथि सुतेका पदम मिश्रलाई सम्झाए ।
विर्तामोड– ८ गरामुनिका २९ वर्षीय मिश्रले बरर आँखाबाट आँशु झारे । “म यहीँ छु । मेरो त घाँटी नै काटिएको थियो । मलाई एकपटक हेर त ! ” समाजसेवी दुर्गा प्रसाईंले उनलाई आँशु पुछिदिँदै थप सान्त्वना दिए ।
अमेरिकामा निर्मित अत्याधुनिक सो उपकरण संसारका उत्कृष्ट कहलिएका अस्पतालले प्रयोगमा ल्याएका छन् । “रेडियसन दिने पछिल्लो पुस्ताको आधुनिक उपकरण जुनदेशमा गए पनि उही हो”, डा यादवले भने । भारतको मेदान्त क्यान्सर अस्पताल छाडेर केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ उनी स्वदेश फर्किएका थिए । पूर्वाञ्चलमा क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने अभियानमा जोडिएका थिए ।
अस्पतालले बुधबारदेखि औपचारिकरुपमा आफ्नो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । पहिलो दिन २७ जना बिरामीले थेरापीका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । “यो हाम्रो सेवा दिने अवसर हो, सेवामा केही कमि रहँदैन । उपकरण उही हो, ज्ञान उही हो । अमेरिका गए पनि पाउने सुविधा यही हो ।” अस्पतालमा मेडिकल निर्देशकसमेत रहनुभएका यादव भन्छन् ।
बिएण्डसी अस्पताल हाताभित्र निर्माणाधीन आधुनिक भवनमा अस्पतालले ‘मुस्कुराउँछ नयाँ जीवन...’ भन्ने नाराका साथ सेवा थालनी गरेको हो । सेवा सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाञ्चल क्षेत्रलगायत नेपालबाट क्यान्सर पहिचान तथा उपचार गर्न भारत तथा अन्यत्र देश जानुपर्ने अवस्थासमेत अन्त्य भएका बताइको छ ।
क्यान्सर पहिचान तथा उपचारका लागि उपचारका लागि आवश्यकपर्ने सबै प्रकारका उपकरण अस्पतालले केही सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । केही द्रुत गतिमा जडान कार्य जारी राखेको छ । ब्रेची थेरापी, पेट सिटी, गामा क्यामेरा, फोर डि पेटसिटी सिमुलेटर, म्यामोग्राम, ब्रेन ल्याब, न्युरो नेभिगेसन सिष्टम, क्याथ ल्याब, डेक्सा स्क्यानको सेवा बिरामीले पाउने अस्पतालका सूचना तथा जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिस गिरीले जानकारी दिन्छन् ।
“क्यान्सरको उपचार नपाएर कोही अकालमा मृत्यु हुन नपरोस् भन्नका लागि अस्पताल बनाउने सपना देखेको हुँ । करिब ३०० शै्ययाको अस्पताल सञ्चालमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । शुरुआत १०० श्ययाबाट भएको छ । झापालाई ‘मेडिकल हब’ बनाउने मेरो सपना छ । ”, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका प्रसाईं भन्छन् ।
भारतमा उनले केही वर्ष अगाडि घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराउनुभएको थियो । “मेरो पीडा जस्तो अरुले खेप्न नपरोस् । समयमा उपचार पाएर पो म कालको मुखबाट बाँचे नत्र । यसपछि सबैकुरा त्यागेर देशलाई क्यान्सर मुक्त बनाउने अभियानको आधार तयार गर्न दृढतले लागेँ”, उनले आफ्ना भोगाई सुनाए ।
बिएण्डसी अस्पतालका मेडिकल निर्देशक प्राडा निराजन पराजुली जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारका दृष्टिकोणले अस्पताल उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्छन् । “काठमाडौँका अस्पतालले मात्र होइन छिमेकी देशका अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छौँ । क्यान्सरलाई मात्र रिफर गर्नुपर्ने अवस्था थियो, यो पनि अन्त्य भयो”, वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा डा पराजुली भन्छन् ।
गत वर्ष उनको नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले करिब १५ घण्टाभन्दा बढी समय लगाई चटक्कै छिनेको खुट्टाको सफल शल्यक्रिया गरेको थियो । अस्पतामा अन्तरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा लिन विशेष गरी झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका बिरामीको चाप अत्यधिक रहेको छ । गत वर्षमात्र पाँच लाखभन्दा बढीले सेवा लिएको जनाइएको छ ।
स्त्रीरोग क्यान्सर विशेषज्ञ प्राडा ज्ञयनाथ बराल भन्छन्, “चिकित्सकले सिकेको ज्ञानलाई उपकरणमार्फत सेवा दिने हो । उपकरण नभई सेवा दिन सकिँदैन । क्यान्सरका लागि त उपकरण विना केही गर्न सकिन्न । यहाँ अति आवश्यक सबै उपकरण रहेको छ । उपकरणविन ज्ञानको अर्थ रहँदैन । दुवै अस्पतालको शल्यक्रिया कक्षसहित सघन उपचार कक्ष संसारका अस्पतालका भन्दा कम रहेका छैनन् ।”
उनले चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल तथा परोपकार स्त्रीरोग थापाथली अस्पतालमा लामो समय चिकित्सा शिक्षा र सेवामा बिताएका थिए । “मेरो कार्यस्थल नेपाल र नेपाली हुन, बिरामी निको भई खुशी भएमात्र चिकित्सक सफल हुने हो । काठमाडौँ मात्र नेपाल होइन नी !”
प्रा डा पङ्कज नेपाल आधुनिक आवश्यक सबै उपकरण र जनशक्तिसहित काठमाडौँ बाहिर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको बताउँछन् । उनले भने, “पूर्वाञ्जल क्यान्सर अस्पतालले बिरामीको गुणस्तरीय सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ ।” -RSS
हात्तीलाई बनभोज, हेर्नेको भिड
गोर्खाली फौज हिँडेको पदमार्गमा ‘एकीकरण टर्च’ !
ह्वाइट हाउस नजिकको ऐतिहासिक धरोहर सेन्ट जोन्स चर्चमा प्रदर्शनकारीद्वारा...
अमेरिकाको राजधानी वांसिटन डिसीस्थित अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस नजिक...
डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई दिए अनसनको चेतावनी
केसीले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकेर परासर कोइराला...
आखिर नेपाली न्यानो स्याटेलाइटको सफल प्रक्षेपण
आखिर नेपालको पहिलो पटक अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट वा भू–उपग्रह केही बेरअघि प्रक्षेपण...